ट्रेन द्वारा हल्याण्ड तुलिप सिजन अनुभव गर्न साँच्चै कुनै पनि आत्म-आदर गर्मी यात्रु पात्रोमा अवश्य छ. एक महिना या त हरेक वर्षको लागि, Flevoland को प्रान्त को क्षेत्रहरू7भन्दा बढी रंगीन फूल को एक सुन्दर र विशाल समुद्र परिवर्तन गर्दै…
युरोप मा गाडिहरु ठूलो कुरा हो; हामी हाम्रो रेल प्रेम, र हामी कुनै पनि समयमा यातायातका कुनै पनि अन्य प्रकार उनलाई चयन छौँ. अलग एक तेज बिन्दु बी इंगित एक देखि रही देखि, सहज र विश्वसनीय तरिका, धेरै भन्दा को त्यहाँ…
को Flam रेलवे Myrdal गर्न Flam देखि लाइन संसारको सबैभन्दा सुन्दर रेल यात्राको हुन भने र हामी किन बुझ्न सक्नुहुन्छ. यात्रा मात्र एक घण्टा लाग्छ तर दृश्यहरु साँच्चै सास-लिनुभएको छ. भ्रमण गर्दा यो अनुभव सम्झना छैन…
तपाईं स्पेन खर्च गर्न दुई हप्ता छन् भने, वरिपरि प्राप्त गर्न सबै भन्दा राम्रो तरिका को एक ट्रेन द्वारा स्पेन अन्वेषण गर्न छ. मात्र यो देश वरिपरि केही अविश्वसनीय ठाँउहरु हेर्न अनुमति दिन्छ, तर स्पेन रेल यात्रा धेरै कुशल छ…
नयाँ रेल लाइन शुरू भएको छ, अजरबैजान कवर, टर्की, र Georgia. लाइन भन्दा समेट्छ 820 किलोमिटर र प्यासेन्जर बाहेक freights accommodates. पहिले, लाइन रूस बाइपास हुँदासम्म युरोप र चीन जडान गर्न पहिलो हुनेछ. The train will operate from…
त्यहाँ स्पेन रोचक र सक्रिय रेल स्टेशन को एक नम्बर हो. तपाईं उच्च गति पाउनुहुनेछ, मध्यम दूरी, क्षेत्रीय, देश भर महानगरीय र होटल-रेल यात्रा. प्रकृति घेरिएको सानो व्यक्तिहरूलाई ठूलो आधुनिक स्टेशन बाट, यी हुन् 10 स्पेन सबैभन्दा आकर्षक ट्रेन को…
युरोप वरिपरि यात्रा को लागि रेल सुझाव यात्री लागि आवश्यक हो. पहिले, त्यहाँ युरोप यात्रा लागि विभिन्न कारणहरू छन्. तपाईं सुन्दर पुल हेर्न सक्नुहुन्छ, रेलवे स्टेशन, र उत्तिकै मनोरम दृश्यहरु. अथवा तपाईं इटाली को अचम्मको संस्कृति हेर्न यात्रा गर्दै. मा…
बुडापेस्ट पक्कै हंगेरी को हब छ. यो धेरै रेल रोक्न छन् बुडापेस्ट ट्रेन यात्रा आउँदा यो एक केन्द्रीय बिन्दु हो. जबकि बुडापेस्ट र सामान्य मा ट्रेन यात्रा धेरै मान्छे को लागि एक नयाँ अनुभव रोमाञ्चक र अक्सर छ,…
सबै keen यात्री बाहिर त्यहाँ पहुँच भइरहेको रेल द्वारा युरोप मा स्थानहरू खोजिरहेको जसले तपाईंलाई बरु एक हवाइजहाज भन्दा रेल यात्रा thrill को सुख अँगालेको थियो किनभने लागि, यहाँ ठूलो समाचार टुक्रा तपाईंलाई मनपर्ने छौँ छ. युरोपेली रेल यात्राको दैनिक सवारी…
सबै भन्दा पहिले, त्यहाँ अप गर्न लागि निःशुल्क रेल हुनेछ 30,000 यस गर्मी किशोर. निःशुल्क टिकट संख्या पनि माग आधारमा बढाउन सक्छ. ईयू अतिरिक्त यो प्रस्ताव वृद्ध किशोर उपलब्ध गर्नेछ घोषणा 18 र साना. कारणले…